Wararka Maanta: Sabti, Oct 5 , 2013-Al-shabaab oo ka warbixisay weerar lala beegsaday guri ku yaalla degmada Baraawe ee Gobolka Shabeellada Hoose
Afhayeenka howlgallada ee Al-shabaab, Sheekh C/casiis Abuu-Muscab ayaa u sheegay warbaahinta in weerarkaas ay soo qaadeen dagaalyahanno reer galbeed ah, balse ay ku fashilmeen, isagoo sheegay in dhankooda hal ruux uu kaga dhintay.
“Xalay 2:00 habeennimo ayaa ciidammo ajnabi ah oo doon yar watay waxay soo gaareen xeebta degmada Baraawe, waxayna doonayeen inay weeraraan guri ku dhow xeebta oo ay ku sugnaayeen rag mujaahidiin ah, balse markii ay xubnihii guriga ku sugnaa arkeen ayaa waxaa billowday dagaal muddo socday,” ayuu yiri Sheekh Abuu-muscab.
Sidoo kale, afhayeenku wuxuu xusay in dagaalkaas ay ciidamadii weerarka soo qaaday ay khasaare ku gaarsiiyeen, balse ma uusan sheegin tirade inta ay tahay. Isagoo sheegay in Al-shabaab uu ruux ka dhintay khasaare kalena aysan soo gaarin.
“Ciidamadii weerarka soo qaaday markii ay arkeen in qorshahooda uusan u suuro-galayn ayay dib ugu laabteen doonidii ay wateen iyagoo aaday halkii ay ka yimaadeen oo markab dushiis ahaa, wayna ku fashilmeen weerarkii ay soo qaadeen,” ayuu yiri afhayeenka howlgallada Al-shabaab.
Wararka ayaa waxay sheegayaan in gurigaas la duqeeyay ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan Al-shabaab, kuwaasoo ay ku jireen hoggaamiyeyaasha ugu sarreeya kooxdan, inkastoo uusan sheegin afhayeenku magacyada xubnaha ku sugnaa guriga la weeraray.
Illaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay inay weerarkaas ka dambeysay, balse wuxuu noqonayaa weerarkii labaad oo ciidammo ajnabi ah ay ku qaadaan deegaannada Koonfurta Soomaaliya ee ay Al-shabaab gacanta ku hayso tan iyo markii uu sannadkan billowday.
Xaaladda degmada Baraawe oo 200-km dhinaca Koonfureed kaga beegan Muqdisho ayaa daggan, inkastoo goobjoogayaal ku sugan degmadaas ay shegayaan in ciidammo badan oo Al-shabaab ay dhinac walba u marayaan degmada.